» यो हप्ता जोगिएलान् बुद्धिका र आमोद ?
यो हप्ता जोगिएलान् बुद्धिका र आमोद ?
२० मंसिर २०७७, शनिबार १८:१७
मकवानपुर, २० मंसिर । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा यो हप्ता उत्कृष्ट ४ जोडीहरु छानिदैछन् । उत्कृष्ट ४ जोडी छानिने भएपछि यो हप्ता कुन जोडी शोबाट बाहिरिएलान् भन्ने चर्चा पनि दर्शकहरुमाझ चलेको छ । गत साता बटम लाईनमा पुगेका दिभान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको ‘देवार्थ’ जोडी बाहिरिएपछि उनीहरुसँगै बटम थ्रीमा परेका फुलन्देकी आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी तथा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडी यो साता खतरामा पर्ने देखिएका छन् । हुन त बटम लाईनमा परेकै कारण आउट नहुन पनि सक्छ किनभने उनीहरुको यो साताको नतिजा दर्शक भोट र यो साता नै निर्णायकहरुबाट प्राप्त हुने अंकमा निर्भर रहन्छ । तसर्थ यी जोडीहरु सुरक्षित हुनसक्ने आधारहरु पनि प्रशस्तै छन् । गत साता छानिएका ५ जोडीहरुमध्ये सबैभन्दा कम अंक ल्याउने जोडीमा पनि यी जोडीहरु पर्दैनन् । यी दुबै जोडीले गत साता निर्णायकहरुबाट राम्रो अंक पाएका थिए । गत साताको शुक्रबार र शनिबारको अंक जोड्ने हो भने उमेश र प्रमोदको आमोद जोडी तथा बुद्ध र केबिकाको बुद्धिका जोडीले समान ५४–५४ अंक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै गत सातासम्मको जम्मा अंक जोड्दा आमोद जोडीले ३१६ र बुद्धिका जोडीले ३२१ अंक प्राप्त गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
त्यस्तै हालसम्म बटम लाईनमा परेका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यी दुबै जोडी उत्तिकै खतरामा छन् । यी दुबै जोडीले हालसम्म समान ३–३ पटक बटम लाईनको सामना गरिसकेका छन् । उनीहरु दुबै जोडीले १–१ वटा बेष्ट पर्फोमेन्सको अवार्ड पनि जितेका छन् । पूर्णाङ्कका आधारमा हेर्ने हो भने आमोद जोडीले आजसम्म ३० मा ३० नै अंक एकपटक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने बुद्धिका जोडीले २ पटक पूर्णाङ्क प्राप्त गरेका छन् । फुलन्देकी आमाका नामले चर्चामा आएका हाँस्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले पहिलो र दोस्रो हप्ता २५–२५ अंक, तेस्रो हप्ता २९ अंक, चौथो हप्ता २५ अंक र पाँचौँ हप्ता २८ अंक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले छैटौँ हप्ता २७ अंक, सातौँ हप्ता २५ अंक, आठौँ हप्ता २९ अंक, नवौँ हप्तामा २३ अंक र २६ अंक तथा दशौँ हप्तामा २५ अंक र २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले दशाँै हप्ता सकिँदा जम्मा ३१६ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्रि स्टाईल, दोस्रो हप्ता कलिहप, तेस्रो हप्ता ओपन स्टाईल र चौथो हप्ता कलिहप डान्स गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले पाँचौँ हप्ता बेली डान्स, छैटौँ हप्ता कलिहप तथा सातौँ र आठौँ हप्ता ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ता चाल्र्सटिन (चाल्र्सटिन्) र ओपन स्टाईल तथा दशौँ हप्ता ओपन स्टाईल र सेमिक्लासिकल डान्स गरेका थिए । यो जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुको जोडीले ३ पटक बटम लाईनको सामना गरिसकेको छ ।
त्यस्तै प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडी चर्चामा छ । बुद्ध र केबिकाले पहिलोदेखि छैटौँ हप्तासम्म समान २६–२६ अंक, सातौँ हप्ता २८ अंक र आठौँ हप्ता पून २६ अंक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले नवौँ हप्तामा २७ अंक र ३० अंक तथा दशौँ हप्ता २४ अंक र ३० अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले दशौँ हप्ता सकिँदा जम्मा ३२१ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्री स्टाईल, दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो, तेस्रो हप्ता कन्टेम्प्ररी र चौथो हप्ता ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले पाँचौँ हप्ता हाउस, छैटौँ हप्ता ओपन स्टाईल, सातौँ हप्ता लिरिकल कन्टेम्प्ररी र आठौँ हप्ता ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ता साल्सा एण्ड साम्बा र ओपन स्टाईल तथा दशौँ हप्ता ओपन स्टाईल र कन्टेम्प्ररी डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन पहिलो पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुले ३ पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् ।